50lọ ọrụ 4050-5000mAh, ndị na - eweta ya - China ndị na-emepụta 4050-5000mAh
Batrị Li-po 5565113 3.7V 5000mAh Batrị ekwentị maka Bluetooth Ọkà Okwu, Ekwentị, Power Bank Phone Ekwentị mkpanaaka
Ihe batrị PLM-5565113 3.7V 5000mAh batrị na-eji ihe kachasị mma na ikike kachasị elu enwere ike maka ndị na-azụ ahịa. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Batrị Li-po 605890 3.8V 4900mAh Ekwentị Batrị maka Ọkà Okwu Bluetooth, Ihe Tomụaka, Bank Bank
Igwe batrị PLM-605890 3.8V 4900mAh nwere ike iji ihe kachasị mma nwere ikike kachasị elu maka ndị ahịa ọkọlọtọ. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Gas Leak Detector Single Gas ihihi mkpu Battery ERT-04 3.7V 4600mAh Polymer Lithium Polymer maka Mejupụtara Gas Detector
Batrị PLM-ERT-04 3.7V 4600mAh batrị a na-ejikọ ya na-eji ihe kachasị mma na ike kachasị elu enwere ike maka ndị na-azụ ahịa. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.